Smart akpaka breeki flash mgbaama Ikanam ìhè okpu agha VE502
Ahaziri iOS APP na Android APP ike LED / COB Light ngosi
Na-akpụzi mgbaàmà ime ka otu-mpempe atụmatụ.
Jikọọ smart ngwaọrụ na Bluetooth iji nweta chọrọ ọrụ
Gwakọta atụmatụ teknụzụ na nchekwa.
Nweta ihu igwe site na eletrọniki juputara.
Typedị ngwaahịa Okpu agha mara mma
Nọmba nlereanya Smart okpu agha VE502
Nkà na ụzụ Ikanam + EPS + PC na-ebu
Njirimara nhazi ikuku, ikuku ikuku siri ike, nkasi obi isi, ejiji ejiji
Ịgbatị nhọrọ Ahaziri APP na Ikanam arụmọrụ
Dị ka anyị ihe karịrị afọ 15 ahụmahụ nke okpu agha R & D otu na rụpụta, smart okpu agha ahaziri iOS APP na gam akporo APP na ìhè na-eme ka mma nchebe ịnya maka ọkụ eletrik. Dị kọmpat nke okpu agha mara mma na-emepụta ụdị mma. In-ebu Ikanam / COB na-egosipụta teknụzụ ọhụụ ọhụụ na echiche dị elu. Igwe okpu agha a kwadebere na APP, akara ọkụ na-acha ọkụ / akara ọkụ na akara, akụkụ atọ ejikọtara ya na abụọ na-acha anụnụ anụnụ, na-ahazi ngosipụta site na APP ma na-agbanye ọkụ ọkụ mgbaàmà nke egosipụtara na-agụnyekwa ọkụ ọkụ
Anyị na ndị ọrụ R&D na-anwale ule na-eduzi aka na aka, anyị kwenyere na okpu okpu mara mma bụ teknụzụ na-eduga nke emebere iji mee okpu agha mara ọkwa na ọkwa ọhụụ nke ụlọ ọrụ nwere ọgụgụ isi. Headdị isi zuru oke dabara adaba na nkasi obi na ike jụrụ oyi yana nnukwu mkpuchi mkpuchi na-eme ka ahụ ruo gị ala n'ime otu ụbọchị site n'ụtụtụ gị na-agagharị na ndị enyi maka mmemme mgbede. Okpu okpu agha a kwadoro nke CE, CPSC na AUS maka nchedo zuru oke.
Nke a kwesịrị ekwesị usoro nwere atọ ọnọdụ nke vetikal adjustablility, a rubberized pịa adjustgbanwe erughị ala na otu aka na ọ na-mere nke a na-agbanwe, inogide ihe iji zere mmebi mgbe a kpọchiri ya. Usoro nke nwere ike iwepu ma dochie anya ya na-enye mgbanwe zuru oke maka mma.
Nke gara aga: E Skuuta okpu V10S
Best Smart okpu agha
Kasị Mma Smart Motorcycle
Smart ịgba ígwè okpu agha
Okpu agha Smart
Ski okpu agha V01S
Skate abanye n'ụgbọelu V10BS